श्रीमानलाई को रोनाले लग्यो, पेटमा ८ महिनाको बच्चा हुर्किदै छ अब मैले यो बच्चालाई कसरि जन्म दिउ ? ( भिडियो ) « Gaunbeshi
श्रीमानलाई को रोनाले लग्यो, पेटमा ८ महिनाको बच्चा हुर्किदै छ अब मैले यो बच्चालाई कसरि जन्म दिउ ? ( भिडियो )
रुपन्देही जिलणलाकि सन्दिया जस्को पेटमा आठ महिनाको गर्भ हुर्किरहेको छ । तिन बर्ष पहिले मागी बिबाह गरेकी सन्ध्य अहिले एक्लै भएकी छिन्। उनका श्रीमानलाई केहिदिन अगाडि मात्र‌ै कोरोनाले लग्यो अहिले उनी एक्लि भएकि छिन् । तीन बर्ष पहिला मागि बिवाह गरेकि सन्दिया उनको श्रीमानको कान्छि श्रीमती हुन्। जेठि श्रीमती पोइला गएपछि उनलाई बिवाह गरेका थिए ।
आफ्नो सन्तानलाई राम्रो मान्छे बनाउने सोच बनाएका यस परिवारको खुसि भगवानले खोस्यो। आफ्नो सन्तान संग रमैलो पल संगै खुसि भएर बस्ने उनको इच्च्क्ष सपनामै मात्र सिमित भयो। मेरो यस्तो अवस्था छ घरमा कमाउने मान्छे कोहि नभएको हुनाले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हस्पिटलमा दुबै आमा र सन्तानलाई बचाउन दुई लाख भन्दा बढि खर्च लाग्ने डाक्टरले बताएका छन् । उपचारको खर्च एकातिर भो’कभोकै बस्नु पर्ने बाध्यता अर्कोतिर ।
आफुले काम गर्न नसक्दा बिहान साझ खाने केहिपनि छैन । आखिर कसरी जम्मा गर्नु त्यतिधेरै दुईलाख । यस्तो गर्भ अवस्थामा पोसिलो खानेकुरा खानुपर्ने चिकित्सकले सल्लाह दिन्छन् तर बिहान बेलुकाकै छाक टार्न असक्षम सन्दियाको जिन्दगी अहिले त हसनहस भएको छ । आफ्नो श्रीमान गु मेपनि आफ्नो बच्चालाई भने बचाइदिनु र बच्चानै आफ्नो जिउने आधार हुने उनी बताउँछिन् । आठ महिना भैसक्यो अब कसरि बच्चालाई जन्म दिने भन्ने कुराले रुन मन लाग्छ। पुरा जानकारी भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।